Wakaaladda Qurbajoogga iyo Dalada SSE oo Ka Qaybgalay Shirka Safiirada SL ee Hargeysa Lagu Gaba-gabeeyay |
Wakaaladda Qurbajoogga iyo Dalada SSE oo Ka Qaybgalay Shirka Safiirada SL ee Hargeysa Lagu Gaba-gabeeyay
Hargeysa(GNN)-Wakaaladda Qurbajoogga Somaliland oo kaashanaysa iyo Dallada Jaalliyadaha Somaliland ee ku bahoobay “Bulshada Somaliland ee Yurub (Somaliland Society in Europe) gaar ahaan wadamada UK, Sweden, Denmark, Germany, Netherlands, France, Belgium, Norway, Finland iyo dalal kale; ayaa maanta ku qabatay kulan lagu lafo guray shaqada Wakaaladda iyo arrimaha khuseeya doorka qurbajoogga Somaliland ee dhinaca waxqabadka iyo horumarka dalka Crown Hotel ee magaalada Hargeysa. Ka soo qaybgalayaasha qurbajoogga ee lagu martiqaaday shirka oo kuwaad tiroodu dhamayd 40 xubnood ayaa waxa sidoo kale ka mid ahaa qurbajoog ka socday jaalliyadaha Somaliland ee Woqooyiga Maraykanka gaar ahaan Canada iyo USA, Australia, Wadamada Carabta, Turkey-ga iyo dalal kale.
Ujeedooyinka shirkan la iska kaashaday waxa ka mid ahaa ka wadatashiga xeerka iyo shuruucda lagu maamulayo Wakaaladda Qurbajoogga Somaliland, xoojinta xidhiidhka wada shaqayneed ee jaalliyadaha iyo Wakaaladda iyo sidoo kale in laga arrinsado kobcinta doorka qurbajoogga ee dhinacyada horumarka iyo maalgashiga dalka JSL.
Waxa ka soo qaybgalay furitaankii shirka kana jeediyay hadallo Wasiir-ku-xigeenka Arrimaha Dibadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL Mudane Axmed Aaden Ismaaciil (Axmed Kayse), Wasiirka Xidhiidhka Goleyaasha JSL, Mudane Cali Xaamud Jibriil, Guddoomiyaha Wakaaladda Qurbajoogga JSL, Mudane Cabdi Cabdillaahi Xirsi, Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeysa Mudane Mahdi Cismaan Buuri, Dhakhtar Xuseen Bulxan iyo aqoonyahanno qurbajoog waaya arag ah oo ku hadlay afka jaalliyadaha wadamada kala duwan ee Yurub sida sare ku sheegan (SSE), Woqooyiga Ameerika iyo wadamo kale.
Dhammaan masuuliyiinta kor ku xusani waxay ka dhawaajiyeen ahmiyadda weyn ee qurbajooggu ugu leeyahay wadanka dhinacyada maalgashiga iyo ganacsiga, dhismaha arrimaha bulshada, dimuqraadiyadda, ictiraaf raadinta iyo horumarka guud ee qaranka JSL, waxanay dhiirrigeliyeen xoojinta isku xidhka, iskaashiga iyo midnimada jaalliyadaha Somaliland, isuduwidda iyo kor u qaadida waxtarka ay dalka u leeyihiin iyo sidoo kale horumarinta waajibaadka shaqo ee Wakaaladda Qurbajooggu u xilsaarantahay. Waxa kale oo gaar ahaan masuuliyiinta xukuumadda ee madasha ka hadlay ugu baaqeen dhammaan jaalliyadaha Somaliland in sidii caadada u ahaan jirtay ee dadkoodu uga barteen ay ka soo qaybgalaan gurmadka abaaraha iyo biyo dhaanka dadka abaaraysan ee gobollada Somaliland.
Wasiir-ku-xigeenka Arrimaha Dibadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL, Mudane Axmed Aaden Ismaaciil (Axmed Kayse) oo shirka furay ayaa ku bogaadiyay qurbajoogga kaalinta waafiga ah ee dalka ugu jiraan, waxanu tilmaamay inay mudanyihiin soo dhawayn iyo dhiirrigelin gaar ahaan wakhtiyada ay dalkooda hooyo usoo guryo noqdaan. Wasiir-ku-xigeenku wuxu ku tilmaamay dacaayado rakhiis ah sida ay warbaahinta qaar uga faaloodeen xafladii soo dhawaynta xagaaga ee 7-dii bisha bulsho qurbajoog ah loogu qabtay Hotel Guleed ee magaalada Hargeysa; waxanu sheegay inaanay mutaysan dadka qurbajoogga ah ee markasta hiil iyo hooba la garab taagan dalkooda in lagu gafo. Wasiir-ku-xigeenku wuxu dhirrigeliyay inay qurbajooggu gacan weyn ka siin karaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda dhinaca xidhiidhka caalamiga ah, diblomaasiyadda iyo dadaallada ictiraaf raadinta ee ay immikaba kaalinta weyn ku leeyihiin. Mudane Axmed Kayse, wuxu ka codsaday aqoonyahanka qurbajoogga ah ee shirka ka soo qaybgalay inay ka caawiyaan Wakaaladda dib u eegista, kaabista iyo waxka bedelka loo baahanyahay ee qabyo qoraalka Xeerka Wakaaladda, waxanu sidoo kale ugu baaqay jaalliyadaha Somaliland inay qayb libaax ka soo qaataan gurmadka abaaraha ka jira gobollada dalka.
Si la mid ah Wasiirka Xidhiidhka Goleyaasha Somaliland, Mudane Cali Xaamud Djibriil ayaa ka hadlay furitaankii shirka; waxanu ku nuuxnuuxsaday kaalinta waxtarka leh ee qurbajoogga Somalialnd kaga jiraan dhismaha iyo horumarinta qaranka isagoo tusaale usoo qaatay hudheellada casriga ah ee ay ka dhiseen caasimadda iyo magaalooyinka kale ee Somaliland.
Qurbajoogga Somalialnd ee madasha ka hadlay ayaa si isku mid ah farta ugu fiiqay sida loogu baahanyahay in dawladdu xoojiso siyaasadda ay ka leedahay arrimaha qurbajoogga, lana dhamaystiro shuruucda ku aadan isuduwidda iyo maamulka arrimaah qurbajoogga, waxanay soo dhaweeyeen tallaabada ay Wakaaladdu qaadday ee ay ka talo gelisay in dejinta shuruudeeda; isla markaana waxay taageereen xoojinta xidhiidhka wada shaqayneed, watashi iyo iskaashiga jaalliyadaha iyo xukuumadda oo Wakaaladdu hoggaamiso. Xubno ka mid ah ka soo qaybgalayaasha shirka ayaa usoo jeediyay in loo fududeeyo qurbajoogga hannaanka maalgashi iyo habka ay u marayaan hindisayaashooda maalgashi markay dalka yimaadaan, halka ay xubno kalena usoo jeediyeen Wakaaladda iyo guud ahaan xukuumadda Somaliland in loo dhiso qurbajoogga xarun weyn oo leh hoolal lagu shiro iyo xafiisyo u gaar ah Wakaaladda si loogu fududeeyo qurbajoogga inay qabsadaan shirarka loo baahanyahay.
Wakaaladda Qurbajooggu waxay ku soo bandhigtay kulankan qabyo qoraalka Xeerka Aas’aaska Wakaaladda Qurbajoogga oo ka soo qaybgalayaasha qurbajoogga oo tiradoodu ku dhawayd 40 xubnood iyo aqoonyahan kale oo lagu soo martiqaaday ka doodeen qodobada xeerka iyo nuxurka ay xambaarsanaayeen, isla markaana ku kordhiyeen afkaartooda ku aadan waxka bedelka iyo kaabista qodobada xeerka ay Wakaaladda usoo jeediyeen.
Wakaaladda Qurbajooggu waxay ka codsatay ka soo qaybgalayaasha shirka ee qurbajoogga inay kala shaqeeyaan tayaynta iyo horumarinta hawlqabadka shaqo ee Wakaaladda, samaynta siyaasad qaran oo Wakaaladdu ku shaqayso (National Diaspora Policy), aas’aaska hannaan dhaqaale horumarineed oo dhaxalgal noqda, hirgelinta qorshayaasha dejisan iyo gaadhista himilooyinka waxqabad iyo horumarineed ee qaranka gaar ahaan dhanka doorka qurbajoogga laga filayo guud ahaan.
Wakaaladda Qurbajooggu waxay sidoo kale ka codsatay jaalliyadaha, gudiyada iyo ururada qurbajoogga ah ee waxqabadka joogtada ah ka gaysta dalka inay la soo socodsiiyaan Wakaaladda hawlaha waxqabadkooda iyo wixii deeqo ah heerkasta si loogu xisaabtamo kaalinta uu qurbajooggu ku leeyahay Qorshaha Horumarinta Qaranka JSL (NDP) oo Wakaaladdu uga warbixiso Wasaaradda Qorshaynta Qaranka JSL taasoo dhinaca kalena waxka taraysa in Wakaaladdu qiimayso hadba heerka uu doorka qurbajooggu le’egyahay.
Gebogebadii shirka, wuxu Guddoomiyaha Wakaaladdu ku dhawaaqiy afar qodob oo lagu soo ururiyay war murtiyeedka ka soo baxay shirkan sidan hoos ku sheegan:-
1. Waxa la soo jeediyay in la meelmariyo Xeerka Aas’aaska Wakaaladda Qurbajoogga Somaliland ee shirkan lagu falanqeeyay;
2. Waxa la isku afgartay in la xoojiyo heerka wada shaqayneed iyo iskaashi ee Wakaaladda Qurbajoogga iyo Gudiyada Jaalliyadaha Somaliland ee ka dhisan wadamada kala duwan ee caalamka;
3. Waxa la isku raacay in Wakaaladda Qurbajoogga Somaliland ka hawlgasho in loo fududeeyo dadka qurbajoogga ah hannaanka maalgashi ee dalka, kana shaqayso in la dhamaystiro wixii shuruuc iyo siyaasad ah ee la xidhiidha iyo
4. Waxa baaq loo soo jeediyay dhammaan qurbajoogga iyo jaalliyadaha Somaliland ee daafaha caalamka inay si dareen wadaninimo iyo naxariis leh uga soo qaybgalaan gurmadka loo baahanyahay ee abaaraha ka jira gobollada dalka wakhtigan xaadirka ah;
Waxa xusid mudan in Wasiirka Arimaha Dibadda & Iskaashiga Caalamiga ah JSL, Mudane Maxamed Biixi Yoonis ee ay Wakaaladda Qurbajooggu hoos tagto Wasaaraddiisa siyaasad ahaan uu mawqif adag ka taaganyahay in kor loo qaado oo la horumariyo hawlqabadka shaqo ee Wakaaladda Qurbajoogga Somaliland iyo guud ahaan xoojinta xidhiidhka wada shaqayneed iyo iskaashiga ka dhexeeya qurbajoogga Somaliland iyo dalkooda ee dhinacyada horumarka, maalgashiga iyo ictiraaf raadintaba.